पार्टीमा फर्कन प्रचण्डको आह्वानपछि बाबुरामको प्रतिक्रिया : हामी लाटा छैनौँ « Sherpa media Group Nepal
पार्टीमा फर्कन प्रचण्डको आह्वानपछि बाबुरामको प्रतिक्रिया : हामी लाटा छैनौँ
प्रकाशित मिति : ३ चैत्र २०७४, शनिबार २३:१२
चैत ,३ – काठमाडौँ । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अनेक कुतर्क गरेर आफ्नो कुर्सीका निम्ति पूरै माओवादी शक्ति एमालेमा विलय गराउन लागेको बताएका छन् ।
‘प्रचण्ड’ ले नयाँ शक्तिमा भविष्य नभएको भन्दै नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईलाई पुरानो घरमा फर्कन आग्रह गरेपछि भट्टराईको सो प्रतिक्रिया आएको हो । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा भट्टराईले लेखेका छन्,
प्रचण्डजीका कुरा सुन्दा स्कूलमा पढेको पाइड पाइपर अफ ह्यामलिन कविताको सम्झना हुन्छ। मिठो मुरलीवादकले सहरका सबै मुसाहरूलाई आफ्नो धुनको पछि लगाएर समुद्रमा होमे झैं प्रचण्ड अनेक कुतर्क गरेर आफ्नो कुर्सीकानिम्ति पूरै माओवादी शक्ति एमाले समुद्रमा होम्दै हुनुहुन्छ।अबका ‘मुसा’ लाटा छैनन् है !विहिबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा नयाँ शक्ति पार्टीका १९ जना कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउदै अध्यक्ष प्रचण्डले भट्टराईलाई गल्ती सच्याएर पार्टीमा फर्कन आग्रह गरेका थिए ।
भट्टराईलाई पटक–पटक आफ्नो पार्टीमा जोडिन आउनुपर्छ भन्दै आएको स्मरण गर्दे प्रचण्डले आफ्नो आग्रहलाई नमानेर भट्टराईले धेरै ठुलो गल्ती गरेको दाबी गरे । फेरी पनि गल्ती सच्याउदै पार्टीमा नफर्के स्वर्गमा पनि भट्टराईले बास नपाउने टिप्पणी प्रचण्डको थियो । उनले भने, “हाम्रो त भनाई बाबुरामजीहरु समेत यही जोडिन आइपुग्नु पर्छ भन्ने हो । नत्र कुनै भविष्य छैन । मैले त उतिबेलै भनेको हो । भनेको भने छु बाबुराम जीलाई । गल्ती गर्नुभएको छ तपाईले । ब्लन्डर गर्नुभएको छ । धेरै ठूलो भुल गर्नुभएको छ । यसको पश्चाताप गरेर फर्कनुपर्ने हुन्छ उहाँले । अनि मात्रै उहाँलाई माथि जाने बेलामा आनन्दसंँ जान पाईन्छ । नत्र पोलेको पोल्यै हुन्छ उहाँलाई । दुख उहाँलाई नै हुन्छ भन्ने चिन्ता छ हामीलाई । ”